BTS Ankara YHT Fanoritsoran'ny tranga Accident - RayHaber | raillynews
[17 / 01 / 2020] Foibe 3 vaovao napetraka tao amin'ny minisiteran'ny fitaterana	Ankara 06
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06BTS Ankara YHT Accident Case Description
14 / 01 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, Railway, ANKAPOBENY, Fast train, Headline, TORKIA
btsden ankara yht filazalazana tranga tranga
United Union Workers Union (BTS) omaly, ny fitsapana voalohany ny lozam-pifamoivoizana haingam-pandeha no nanambara ny tena andraikiny amin'ny tolona hamoaka ny tena marina.
Ny fanoratana nosoratan'ny BTS dia toy izao manaraka izao; 13. Fiaran-dalamby haingam-pandeha mitovy amin'ilay fiaran-dalamby ao Ankara-Konya nianjera tamin'ny 2018 Desambra 3 tao Ankara-Marsandiz, 9 tamin'izy 92 no maty ary 1 no naratra tamin'ny lozam-piaran-dalamby (13 Janoary 2020) Tao amin'ny Fitsarana Penitra Heavy faha-30 no nahitana azy omaly.
Tao amin'ny fanamelohana nataon'ny fitsarana, ny fahafatesany sy ny ratra nahatratra olona iray mahery noho ny fiampangana azy an-tranomaizina hatramin'ny 15 taona, ny telo tamin'ireo telo voampanga dia nandray anjara tamin'ny fakana am-bavany ny voampanga 10.
Taorian'ny famotopotorana momba ny mombamomba ireo voampanga sy mpimenomenona dia nanomboka ny fanambarana nomen'ny voampanga sy ny fitsarana ary ny fanoloran-dalàna mandra-pahatongan'ny ora hariva.
Amin`ity tranga ity, raha ny fanambarana sy fanambaràna natao tamin ny manamboninahitra Fikambananny Train sy machinista maty tamin ny loza, dia nangatahina ny Fitsarana Jeneralin'ny TCDD sy ny mpitantana foibe miampy ny asa fanaraha-maso raha tsy misy ny tena fahamarinana.
Tamin'ny faran'ny fakana am-bavany ny fitsarana dia nanapa-kevitra ny hanohy ny fitazonana ny mpiasan'ny Organisation Train Osman Yildirim ary nanemotra ny fakana am-bavany ny 24 Janoary 2020 ary nanapa-kevitra ny hamotsotra an'i Sinan Yavuz sy ny mpitantana ny fifamoivoizana Emin Ercan Erbey.
Ny azo antoka aloha dia tokony ho marihina fa misy ny tsy fisian'ny rafitra fanaovana sonia no mahatonga ity loza ity. Raha atao amin'ny teny hafa, ny loza mitovitovy amin'izany dia azo atao amin'ny fotoana rehetra. Nohamafisin'ny tale jeneraly an'ny Tiorka State Railway (TCDD) fa ny fihenan'ny ora sy ny fotoanan'ny serivisy fiovana no novana taorian'ny loza.
Betsaka ny lozam-pifamoivoizana natao teto amin'ny lalamby nataontsika hatreto, olona an-jatony no maty ary naratra tamin'ireto loza ireto.
Isika no tena antony mahatonga ireo loza ireo amin'ny fotoana rehetra; Tamin'ny vanim-potoana AKP miaraka amin'ireo fanao nampiharina nanomboka tamin'ny taona 2003 noho ny anaran'ny famerenana indray ny TCDD, mihoatra ny hadisoan'ny mpiasa tsirairay; Ny mpanao politika sy ny bureaucrats dia mandray dingana siantifika, mpiasa tsy mendrika dia tonga miasa, tsy ampy mpiasa, mihoatra ny iray ny lohateny iray sy ny sisa.
Ireo antony ireo dia nohazavaina tamin'ny an-tsipiriany tao amin'ny tatitra efa nomanin'ny firaisana nataontsika momba ny lohahevitra sy ny tatitra; "Mazava fa ny tsindry politika amin'ny andrim-panjakana hanokatra tsipika tsy misy fepetra ho an'ny fampisehoana ara-politika no antony iray lehibe mahatonga ny birao zokiolona hangina ary hanome torolàlana ireo lehibeny mba hamoaka ireo baiko hafahafa ireo fa tsy hisakana azy ireo tsy ho teritery hankatoavina ny andrim-panjakana. ”Nolazaina hoe aiza no tokony hitadiavana andraikitra lehibe.
Raha ny fitantaranay, ny tena andraikiny amin'ity loza ity dia tena miharihary. Ary indrisy, mahita indray isika fa ny olona tena tompon'andraikitra dia tsy mba nitondra ny fitsarana taorian'ny loza.
Tokony ho fantatra fa ny fanenjehana amin'ny feon'ny fieritreretan'ny besinimaro dia tsy ho voavaly tanteraka alohan'ny hanapahankevitra ny hanokafana tsipika alohan'ny hahavitan'ny fangatahana sonia omena alohan'ny fitsarana.
Tokony ho fantatry ny besinimaro rehetra fa hanohy ny tolontsika miaraka amin'ny finiavana isika hampiseho ny tena andraikiny amin'ity loza ity.
avy amin'ny BTS Çerkezköy Famoahana gazety ao amin'ny Train Train
BTS sy TMMOB dia nanao fanambarana an-gazety momba ny loza tao Ankara
BTS'den TCDD taorian'ny asa tsy voatanisa 5 Fanontaniana!
Mampiato ny tatitra momba ny tsy fitovian-tsoa avy amin'ny BTS i Corlu: "15 Ny antsasaky ny mpiasa dia aleo
Ankara YHT loza noho ny fijoroana ho vavolombe vavolombelona vavolombelona
Manomboka amin'ny Fitsapana Voalohany ny Fitsarana YHT Ankara
Ankara YHT tranga lozam-pifamoivoizana 2 Fandroahana azy
Famaritana ny Elvankent YHT Accident avy amin'ny TCDD
Famonoana olona atahorana YHT 9 olona manomboka anio
Niditra tao Afyonkarahisar ireo mpikambana ao amin'ny BTS nandeha avy any Ankara mankany Balikesir
BTS mangataka ny fananganana ny station Ankara!
Ny Filoham-pirenena BTS dia manadihady sy mitory momba ny tohodranon'ny fiaramanidina
BTS, Çorlu Lalana Mitaky Fitadiavan-tifitra New Expertise
Ankara YHT loza
Rahara YHT Accident Accidentité
Matetika ireo manam-pahaizana no nantsoina hoe Emin Erbey
Matihanina kokoa antsoina hoe Osman Yıldırım
Tranga tsy ampoizina YHT
Ben'ny tanàna İmamoğlu: 'Ny vidin'ny Channel Istanbul Fanontaniana Mark'
Foibe 3 vaovao napetraka tao amin'ny minisiteran'ny fitaterana
Kanal Istanbul Report EIA nankatoavina
Laharam-pahamehan'i Bursa tamin'ny taona 2020